ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဂေါ်မစွံဘဲ FA ဘဝရောက်နေတဲ့ လူပျိုသိုးကြီးတွေရှိလား ??? သူသေ ကိုယ်သေ အပြိုင်ဖိုက်နေရတဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြဲ ရန်သူတော် သူငယ်ချင်းတွေရောရှိလား ? လာပါပြီနော် ... " လူပျိုသိုးည " တဝါးဝါး တဟားဟားရယ်ရမယ့် " လူပျိုသိုးည "
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဂေါ်မစွံဘဲ FA ဘဝရောက်နေတဲ့ လူပျိုသိုးကြီးတွေရှိလား ??? သူသေ ကိုယ်သေ အပြိုင်ဖိုက်နေရတဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြဲ ရန်သူတော် သူငယ်ချင်းတွေရောရှိလား ? လာပါပြီနော် ... " လူပျိုသိုးည "
" လူပျိုသိုးည "
ပြေတီဦး ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ မိုးဟေကို ၊ ဗေလုဝ ၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ